कार्यसमितिमा ८ जनालाई मनोनयन – Halkaro
चितवन । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको कार्यसमितिको बुधबार वसेको वैठकले बिभिन्न क्षेत्रका बिज्ञहरु सहित ८ जनालाई कार्यसमिति सदस्य पदमा मनोनयन गरेको छ । संघको बिधान बमोजिम संघका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले कार्यसमिति सदस्यमा १ जना महिला सहित ३ जनालाई मनोनयन गर्नुभएको हो ।
यसैगरि कार्यसमिति सदस्यहरुमा साधारणसदस्य मध्येबाट बिनोद पौडेल, वोद्यराज पौडेल र योगीता पिया (महिला) लाई मनोनयन गरिएको हो । संघले आफ्नो कार्यक्षेत्र कृषि,पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थय लगायत बिभिन्न क्षेत्रका बिज्ञहरुलाई विशिष्ट सदस्यमा समेत मनोनयन गरेको छ ।
विशिष्ट सदस्यहरुमा डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल (स्वास्थ्य), डा. होम बहादुर बस्नेत (कृषि), कपिलदेव सुवेदी (शिक्षा), दिलिप मैनाली (पर्यटन) र विशिष्ट सदस्यमै ज्ञानेन्द्रमान शाक्यलाई मनोनयन गरिएको संघका कार्यक्रम अधिकृत निलबहादुर के.सी.ले जानकारी दिए । संघको कार्यसमितिमा मनोनित सदस्यहरु सहित ३४ सदस्यि कार्यसमिति बनेको छ । संघको गत पौष २९ र ३० गते सम्पन्न संघको ५१ औं वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट संघका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानको नेतृत्वमा नयां कार्यसमिति निर्बा्चित भएको थियो ।
← विश्व क्रिकेट लिगः विहीबार नेपाल र नामिविया भिड्ने
प्रदेश ६ मा बाम गठबन्धनको क्लिन स्वीप →